Lenovo S5 Pro: atụmatụ, akwụkwọ ntanetị na ọnụahịa | Gam akporosis
Mgbe ọtụtụ ịkọ nkọ banyere Lenovo S5 Pro nke sitere na izu ndị a gara aga, ụlọ ọrụ China mechara gosipụta ya iji nye nkwubi okwu asịrị ahụ. Ebe ọhụụ ọhụrụ dị ugbu a.
Ngwaọrụ a na-eji usoro Qualcomm 63X Snapdragon processor, nke na-etinye ya n'ụzọ doro anya ekwentị zuru oke na nkọwa zuru oke. Tụkwasị na nke ahụ, ejiri ya mee ka ọ bụrụ nke na-egbu mara mma ma jupụta na àgwà ndị na-adọrọ mmasị, yana ọnụahịa asọmpi.
Ejiri Lenovo S5 Pro nwere ihuenyo 6.3 inch. Nke a nwere oke oke wara wara ma rute mkpebi FullHD + nke 2.246 × 1.080 pikselụ (19: 9). Ọ nwekwara ọkwa elongated horizontally, nke ọ na ụlọ abụọ foto sensọ.
Onye octa-core Snapdragon 636 na-akwado ike nke ọnụ ahụ, nke nwere ike inweta ihe kachasị nke 1.8 GHz ekele maka isi ya Kryo 260. N'ozuzu, chipset na-esonyere Adreno 509 GPU, 6 GB nke RAM na 64 GB nke ebe nchekwa dị n'ime. Ihe niile na-agba ọsọ n'ihi batrị ikike 3.500 mAh na nkwado maka ngwa ngwa 18-watt.
The foto ngalaba nke mobile mejupụtara a igwefoto azụ abụọ nke mkpebi 20 na 12 MP na site na ihe mmetụta ihu abụọ nke 20 na 8 MP. Igwefoto azụ nke 12 MP bụ igwefoto azụ nwere oghere sara mbara nke na-akwado okpukpu itoolu omimi nke ala ghara ịdị na ozugbo na okpukpu abụọ na-enweghị mbugharị ngwa anya, ebe igwefoto igwefoto abuo nke 20 MP bụ Sony na 8 MP na infrared; nke a iji jeere sistemụ mmeghe ihu ihu 3D nke ọnụ ya.
Akụkụ ndị ọzọ nke Lenovo S5 Pro gụnyere Android 8.1 Oreo n'okpuru ZUI 5.0, Typedị USB-C na mmụba nke ebe nchekwa dị na ya site na oghere kaadị microSD.
1 Mpempe akwụkwọ nka na ụzụ
IKIRU 6.3 "FullHD + IPS LCD 2.246 x 1.080p (19: 9)
Nhazi Snapdragon 636
Meme ncheta 64 GB gbasaa site na microSD
Ndị isi Ihu: abụọ 20 na 12 MP / Azụ: okpukpu abụọ 20 na 8 MP
UMUAKA 3.500 mAh na ngwa ngwa 18-watt
OS Android 8.1 Oreo n'okpuru ZUI 5.0
Atụmatụ ndị ọzọ Onye na-agụ mkpịsị aka na-abịaghachi. Ihu ihu. Ogwe 3.5 mm. USBdị USB C
The Lenovo S5 Pro ga-aga na-ere na China na October 23 maka ọnụahịa setịpụrụ nke yuan 1.298, nke bụ ihe dị ka euro 160 na ọnụego mgbanwe. N'oge ahụ, amabeghị ma ọ ga-aga ire na mpaghara ndị ọzọ, dịka Europe. A ga-amata nke a n’ọdịnihu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Lenovo » New Lenovo S5 Pro: 6.3 ″ FHD + panel, SD636 na ndị ọzọ